ဖရိန်များ နှင့် ကြားခံ Insulation များ
အဆင့်မြင့်အိမ်သာ နှင့် ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်များ
ရေချိုးခန်းနှင့် မီးဖိုချောင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
ကြွေပြား နှင့် ကြွေပြားကပ်ကော်
Toilet အခန်းများ နှင့် တံခါးများ
In 1998, Mahaphant group has successfully led the way in leader of wood substitution products with its creative flare and pioneer spirit by introducing “ SHERA wood” into the market. Under the brand SHERA, SHERA wood creations are unique both in terms of originality and aesthetic qualities.
Mahaphant group has operated under “ Green Policy” for years and was the very first company in Thailand to introduce the concept of manufacturing an “ environmentally friendly” building material through an eco-friendly manufacturing process in the fibre cement composites industry.
အမှတ် ၂၃ ၊ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊၁၅ ရပ်ကွက် ၊လှိုင်မြို့နယ် ၊ရန်ကုန် ။
၀၁-၃၆၈၁၈၀၅၊ ၃၆၈၁၈၀၆၊ ၃၆၈၁၈၈၃၊ ၃၆၈၂၉၄၅ ။
Facebook ပေါ်တွင် Like ပြုလုပ်နိုင်ရန်
Copyright © 2021 By TWJS Company Limited.